‘मलाई थुन्नु’ भन्दै पुरुष जब आफै प्रहरी कार्यालय पुगेपछी…. - Khabar Nepali
शनिबार, मङि्सर १८, २०७८
होमपेज / अन्तर्राष्ट्रिय / ‘मलाई थुन्नु’ भन्दै पुरुष जब आफै प्रहरी कार्यालय पुगेपछी….
‘मलाई थुन्नु’ भन्दै पुरुष जब आफै प्रहरी कार्यालय पुगेपछी….
अधिकांश मानिसहरूका लागि जेल जानु भनेको स्वतन्त्रता खोस्ने कार्य हो। तर त्यहाँ एक व्यक्ति जो चाहन्छन् कि उनलाई जेलमा राखियोस् । उनी घरमा श्रीमतीसंग बस्नु भन्दा जेलमा बस्न उचित ठान्छन् । घरमै थुनिएका व्यक्तिले आफूलाई जेल पठाउन प्रहरीलाई आग्रह गरेका छन् । श्रीमतीसँग घरमा बस्नुभन्दा जेलमा बस्नु राम्रो भएको ति ब्यक्तिको भनाई छ । यो घटना इटालीको गुइडोनिया मोन्टेसेलियो नामक क्षेत्रमा भएको हो ।
स्थानीय प्रहरीले ३० वर्षीय पुरुषले आफुलाई जेल हाल्न अनुरोध गरेको पुष्टि गरेको छ। मूल रूपमा अल्बानियाका ती पुरुषले आफ्नी श्रीमतीसँग घरमा बस्न निकै पी डा दायी हुने बताएका छन् । ड्रग घटनामा उनी केही महिनादेखि घरमै थुनिएको प्रहरीले जनाएको छ । उनी अझै केही वर्ष घरमै नजरबन्दमा बस्नुपर्ने थियो ।
‘म अब सहन सक्दिन’ । प्रहरी चौकी पुगेपछि ती व्यक्तिले प्रहरीलाई भने– ‘सुन्नुहोस्, मेरो घरेलु जीवन नरक बनेको छ । म अब सहन सक्दिन। म जेल जान चाहन्छु। सोही क्रममा घरबाट बाहिर निस्केको भन्दै प्रहरीले तत्कालै पक्राउ गरेको थियो । यसपछि न्यायिक अधिकारीले उक्त व्यक्तिलाई जेल हाल्ने आदेश पनि दिएका थिए ।
यो घटनालाई लिएर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले धेरै प्रतिक्रिया दिएका छन् । उखानलाई उद्धृत गर्दै एकजना पुरुषले भनेका थिए– झ ग डा गर्ने महिलासँग बस्नुभन्दा निर्जन मरुभूमिमा बस्नु राम्रो हो । त्यही क्रममा एक प्रयोगकर्ताले लेखे–यो व्यक्तिले घरमा आफ्नो भागको काम पूरा गर्न सके, त्यसैले बिदा मागेको जस्तो लाग्छ । त्यही क्रममा अर्का प्रयोगकर्ताले ती व्यक्तिलाई डिभोर्स गर्न सल्लाह दिएका छन् ।
सर्बसाधरणले जस्तै अमेरिकामा काम गर्न चाहन्छिन् पूर्व राजकुमारी माको
सोफामा म सँग टाँ’सिएर उनले …..
चीनमा फेरी कोभिड फर्कियो लान्चो शहरमा ४० लाख जनसंख्या घरभित्रै
खानको लागि पैसा नभएपछि ५०० डलरमा बच्चा बे’चियो
१.डिभोर्सवारे बल्ल बोलिन् प्रियंका चोपडा, सबैलाई धन्यवाद भन्दै दिइन् यस्तो जवाफ
२.नायक निखिल उप्रेतीले गरे श्रीमतीसँग डिभोर्स: दिए भक्तपुरको घर र ५० लाख
३.फेसबुकमा चिनजान भएर पहिलोपटक होटलमा पुर्यायो त्यसपछि……..
४.कट्रिनाले आफ्नो विवाहमा के सलमानलाई निम्ता दिइनन् ? सलमानको बहिनी अर्पिताले खोलिन् रहस्य
५.कट्रिना विक्कीको बिहेमा आउन यस्ता सर्त पुरा गर्नुपर्ने भएपछि रिसाए पाहुना, सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने
६.‘टिकटक क्विन’ रेश्माको विवाहमा वर्षाको रमाइलो, को को पुगे विराटनगर ?
७.यिनै हुन् जो जहाजको ल्या’न्डि’ङ गि’यरमा बसेर ग्वाटेमालाबाट अमेरिका पुगे
८.पहिलोपटक सार्वजनिक गरे अक्षयले आफ्नो बडीगार्ड, उनको खुवी यति सम्म रहेछ जुन अक्षयले नै गरे खुलासा (भिडियो सहित)